Portal:Cunto - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Wikipedia:Cunto)
Cunto bisil oo diyaar ah
Khudaar ( ) waa midho ka baxa dhirta kuwaas oo lagu darsado cuntada. Khudaartu way ka duwan tahay midhaha, sababtoo ah midhuhu waa cunto bisil oo in la kariyo u baahnayn, laakiin inta u badan khudaarta waa in la kariyo ka hor intaan la cunin. Khudaarta maalin walba dadku isticmaalaan waxaa ka mid ah: basasha, tamaandhada, barandhaha, saladhka, toonta, kaarootka, besbaaska, iyo kuwo kale oo badan.
Hilib(; ) waa jiidhka xayawaanka kaasi oo dadku u quutaan cunto ahaan. Sida caadiga ah, aadamuhu (dadka) waa gebi-quute (Saynis ahaan omnivorous), taasi micnaheedu waa in dadku quutaan hilibka iyo caanaha xayawaanka iyo dhamaan kheyraadka dhirta.
Cunto Soomaali (; ) waa cuntada ay caanka ku yihiin dadka Soomaalida meel kasta ooy aduunka kaga nool yihiin. Cunto Soomaaliga waxaa ka id ah cuntada hido iyo dhaqanka, casuumadaha, cuntada maalin kasta la isticmaalo iyo dhamaan raashinka dadka Soomaalidu isticmaalaan sida hilibka, sukhaarka, bariiska, baastada, garowga, heeda iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa cunto Soomaaliga ka mid ah habka iyo qaabka dadka Soomaalida u diyaariyaan (kariyaan) cuntada, iyo noocyada u khaaska ah dadka Soomaalida.
Last edited on 26 Juun 2017, at 06:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Juun 2017, marka ee eheed 06:33.